Covid-19: အစိုးရများနှင့် အလုပ်ရှင်များ အတွက် ITF တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များ | ITF Seafarers
Covid-19: အစိုးရများနှင့် အလုပ်ရှင်များ အတွက် ITF တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တောင်းဆိုချက်များ
Covid-19 သည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်း မကြုံဘူးခဲ့သည့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုကို ဖန်တီးနေပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း – အလုပ်သမားများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် အစိုးရများသည်- ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ပျက်စီးမှုများကို အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် အတူတကွလုပ်ကိုင်ရမည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်ပါသည်၊ ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များနှင့် ကမ္ဘာ့ရှင်သန်မှုကို ဆက်လက်ထိန်းထားပေးမည့် အချိတ်အဆက်ဖြစ် နေစေသည့်အပြင် Covid-19 အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုကို အောင်မြင်စွာ တုံ့ပြန်ရေး၌ အခရာကျပါသည်။
ယနေ့သော် ယခင် မကြုံဘူးသည့်ထက်ပိုမို၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် ကုန်ပစ္စည်းဖြန့်ချီရေးများကို ၎င်းတို့ကိုလိုအပ်နေသည့်သူများထံ အဆိုပါသူများမှာ သင်္ဘောသားများ၊ ဆိပ်ကမ်းအလုပ်သမားများ၊ ကုန်ကားမောင်းသမားများ၊ ဂိုဒေါင်အလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် သယ်ဆောင်ပို့ချရေး ကားမောင်းသမားများဖြစ်ဖြစ် ရောက်ရှိစေရန် သေချာအောင်လုပ်ရလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ လေယာဥ်ဝန်ထမ်းများ၊ လေယာဥ်မှူးများနှင့် လေကြောင်း အလုပ်သမားများသည် လူများအား သူတို့၏ မိခင်နိုင်ငံများဆီသို့ ပြန်ပို့ပေးရန် ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ပေးရပါလိမ့်မည်။ အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများသည် အလုပ်သို့သွားနိုင်သေးသူများကို သို့မဟုတ် ကုသမှုအတွက် ဆေးရုံသို့ရောက်ရန်လိုအပ်သူများကို ပို့ပေးရန် သေချာစေရပါလိမ့်မည်။
ITF က ယုံကြည်သည်မှာ လက်ရှိ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမား စံနှုန်းများနှင့် အလုပ်သမား အခွင့်အရေး အကာအကွယ်ပေးရေးတို့မှာ Covid-19 ကို ထိန်းချုပ်လိုက်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏ အားထုတ်မှု၏ အောင်မြင်မှုအတွက် အခရာကျပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ လူသား ယောင်းရင်းများအပေါ် ပြောင်းလဲမှုကို ဖန်တီးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်အားမှာ အချို့လူများ၌ ပိုမိုဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကြီးမားကာ ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသော်ငြားလည်း စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်ကို ဝေမျှခံစားရပါသည်။ အစိုးရများသည် အကြီးမားဆုံး တာဝန်နှင့်ကြုံတွေ့ရသည် – သို့သော်လည်း အလုပ်ရှင်များမှာလည်း ထိုနည်းအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။
မတ်လ ၁၂ ရက်နေ့တွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သမဂ္ဂ ကောင်စီ (Council of Global Union (CGU)) ၏ ထုတ်ပြန်ချက်နှင့်အညီ ITF သည် အဓိက ငါးနေရာတွင် ချက်ချင်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ပေးရန် တောင်းဆိုလိုက်ပါသည်။
1. Covid-19 တုံ့ပြန်မှုအတွက် အခရာကျသည့် အလုပ်သမားများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း
2. ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးကို ပထမ ဦးစားပေးခြင်း
3. အလုပ်သမား အားလုံးအတွက် ဝင်ငွေ အကာအကွယ်ပေးမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း
4. စီးပွားရေး ဆက်လက် ရှင်သန်နေစေရန်အတွက် အစိုးရ-ဦးဆောင်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ့စီးပွားလှုံ့ဆော်မှု လုပ်ပေးခြင်း
5. တည်တန့်နေမည့် ကုန်စည် ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များကို ထိန်းသိမ်းထားပေးခြင်း
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး သမဂ္ဂများသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအားဖြင့် ကမ္ဘာ့ ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များနှင့် ကမ္ဘာ့ရှင်သန်မှု ဆက်လက်ရှိနေရေးကို ဆက်စပ်ပေးရာ၌ မိမိတို့၏ အလုပ်တာဝန်အပိုင်းကို ထမ်းဆောင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ITF သည် အစိုးရများနှင့် အလုပ်ရှင်များ နှစ်ဖက်လုံးအား ကဏ္ဍတစ်ခုစီ၌ အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် ဆော်သြနေလျက်ရှိပါသည်။
1. Covid-19 တုံ့ပြန်ရေးအတွက် အခရာကျသည့် အလုပ်သမားများကို အကာအကွယ်ပေးခြင်း
ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များမှာ ကမ္ဘာတစ်ဝန်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ပေးရန် အခရာကျပါသည်၊ ဆေးဝါးများ၊ အစားအစာ၊ ကိရိယာပစ္စည်း၊ နှင့် Covid-19 ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အခရာကျသည့် ဖြန့်ချီပစ္စည်းများ အပါအဝင်ဖြစ်ပါသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများကို Covid-19 တွန်းလှန်ရာ၌ အခရာကျသည့် ဝန်ဆောင်မှုကို ဆောင်ရွက်ပေးနေစဥ် အသိအမှတ်ပြုသင့်ပါသည်။
အားလုံးသော ကဏ္ဍများရှိ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အလုပ်သမားများကို Covid-19 အား ကမ္ဘာအနှံ့ တွန်းလှန်မှု၏ အောင်မြင်မှုအတွက် အချက်အချာအဖြစ် မှတ်ယူသင့်သည်၊ ကမ္ဘာအနှံ့ ရောဂါပျံ့နှံ့မှု အတောအတွင်းအတွက်နှင့် ဗိုင်းရတ်စ်လွန်မြောက်ပြီး ဖြန့်ချီပစ္စည်းကွင်းဆက်များ တည်ငြိမ်ရေးအထိ ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်ပြင်ပရှိ လူများနှင့် ထိတွေ့မှုဖြင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် အခြား အခရာကျသည့် အလုပ်သမားများသည် တိုးမြှင့်ပေးထားသည့် ဝင်ငွေ အကာအကွယ်ပေးမှု လက်ခံ ရရှိသင့်ပြီး အကယ်၍ အသေအပျောက် သို့မဟုတ် အကြီးအကျယ် နာမကျန်းမှုဆီသို့ ဦးတည်မည့် COVID-19 ကူးစက်ခံရမည့်ကိစ္စ၌ သူတို့၏ မှီခိုသူများအား လျော်ကြေးပေးရန် အာမခံချက် ထားရှိရမည် ဖြစ်ပါသည်။
Covid-19 ကို တွန်းလှန်ရန် အခရာကျသည့် ဝန်ဆောင်မှု ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် ထိုလုပ်ငန်းကဏ္ဍများ အပါအဝင် အားလုံးသော အလုပ်ကဏ္ဍများရှိ အလုပ်သမားများကို သူတို့၏ အဓိက အလုပ်သမား အခွင့်အရေးများအား လေးစားသောအားဖြင့် ဗိုင်းရတ်စ်အတွက် အခမဲ့ ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုများ လုပ်ပေးသင့်သည်။
အစိုးရနှင့် အလုပ်ရှင်များသည် ကုန်သွယ်သမဂ္ဂများနှင့်အတူတကွ အလုပ်သမားများ၏ အခွင့်အရေးများနှင့် လူမှူဖူလုံရေးအပေါ် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန် လုပ်ကိုင်ရမည်။ သူတို့သည် Covid-19 ပျံ့နှံ့မှုကို တားဆီးရန် အထောက်အကူပြမည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို စီစဥ်ပြီး လုပ်ဆောင်သင့်သည်။
အလုပ်သမား၏ ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုမှာ COVID-19 ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး စီမံမှု၏ အဓိက အခြေခံ စည်းမျဥ်းဖြစ်သင့်ကြောင်း အသိအမှတ်ပြုရန်။ ဤနည်းသည် ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကို သေချာစေရန် အကောင်းဆုံးနည်းဖြစ်ကြောင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုတေသနက အတည်ပြုသည်။ အလုပ်သမားအင်အားစု ကိုယ်စားလှယ်များတွင် Covid-19 ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို ရေးဆွဲရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးတွင် တန်းတူအခန်းကဏ္ဍတစ်ခု ရှိရမည်။
အလုပ်သမားများအပေါ် Covid-19 က ဖြစ်ပေါ်စေသော ဖိအားအသစ်များနှင့် ဤဖိအားများ၏ သက်ရောက်မှုကို လျှော့ချရန် လိုအပ်သည့် (လျှော့ချလိုက်သည့် အလုပ်လုပ်ရန်အချိန်နာရီများ၊ လုပ်ခ မဆုံးရှုံးစေဘဲ တိုးမြှင့်ရရှိမည့် အနားယူချိန်များ၊ ဆွေးနွေးအကြံပြုကုထုံး စသဖြင့်ကဲ့သို့) အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ နှစ်မျိုးလုံးအား ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရန်အတွက် သမဂ္ဂများနှင့်အတူတကွ လုပ်ကိုင်ရန်။
လုပ်ငန်းလည်ပတ်နေသည့် ဝန်ဆောင်ဌာနများသို့ သွားရောက်ပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့် ဗိုင်းရတ်စ် အပေါ် အလုပ်သမား အထိအတွေ့နှင့် နောက်ထပ်ပျံ့နှံ့မှုကို လျှော့ချရန် မှန်ကန်သော နည်းလမ်းများ အသုံးပြုနေကြောင်း ရှိမရှိကို စစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် အာဏာအပ်နှင်းခံရသော Covid-19 စိစစ်ရေးမှူး အဖွဲ့များကို တည်ထောင်ပေးရန်။
အားလုံးသော အလုပ်လည်ပတ်မှုများနှင့် အလုပ်တာဝန်များအတွက် Covid-19 အန္တရာယ်အဆင့်များကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် သမဂ္ဂများနှင့် အလုပ်သမားများ ပူးတွဲလုပ်ကိုင်ရန်။
အောင်မြင်မှုအတွက် အခရာကျသည့် (သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်စည် ပို့ချရေးနှင့် ကုန်စည် သယ်ဆောင်ရေး အပါအဝင်) ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများရှိ အလုပ်သမားများအတွက် အခမဲ့ စစ်ဆေးမှုကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်။
အန္တရာယ်ရှိသည့် နေရာများ/အလုပ်တာဝန်များရှိ အလုပ်သမားများကို အကောင်းဆုံး အကာအကွယ် ပေးရန် မည်သို့သော ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကာအကွယ်ပေး ကိရိယာပစ္စည်းနှင့် ဖြန့်ဝေပစ္စည်းများ လိုအပ်ကြောင်း တွက်ချက်ပြီး ၎င်းတို့ကို ဖြန့်ချီပေးရန်။
လုပ်ခနည်း အလုပ်သမားများအား အထူးဂရုစိုက်ပါ၊ ဥပမာ တစ်ဆင့်ခံ ကန်ထရိုက်ဖြင့်လုပ်သည့် အလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမားများအပြင် အမျိုးသမီးများနှင့် ရောဂါများရှိနေသည့် အလုပ်သမားများဖြစ်သည်။ ဤအလုပ်သမားများသည် ရောဂါကူးစက်မှု၏ မြင့်မားသော အန္တရာယ်ရှိကြသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ဆင်းရဲမှုနှင့် မကောင်းသော-ကျန်းမာရေးသည် လူများ၏ ကိုယ်ခံစွမ်းအားကို လျှော့ကျစေသည်။ ဆင်းရဲခြင်းသည် အိမ်ရာကို ပြည့်ကျပ်နေစေရန်နှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် မညီညွတ်စေရန်ကိုလည်း ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
အလုပ်သမားများ၏ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အချက်အလက်များကို အကာအကွယ် ပေးရန်ဖြစ်သည်၊ အထူးသဖြင့် ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမားများ၏ အချက်အလက်များဖြစ်သည်။ အချက်အလက် ပေးကမ်းဖလှယ်ခြင်းကို လိုအပ်မှု-အပေါ်အခြေခံသင့်ပြီး တတ်နိုင်လျှင် အမည်မဖော်ဘဲ ထားရှိသင့်သည်။
အလုပ်သမားများနှင့် သူတို့၏ မိသားစုများ၏ ဝင်ငွေသည် တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စီးပွားရေး၏ တည်ငြိမ်မှုကို ပံ့ပိုးမည်ဖြစ်သည်။ အချိန်ပိုင်း-အလုပ်သမားများ၊ ပြောင်းရွှေ့အလုပ်သမားများ၊ နေထိုင်သူ-မဟုတ်သော အလုပ်သမားများ၊ မရေမရာ အလုပ်သမားများ၊ ‘ယာယီ’ နှင့် တရားမဝင် အလုပ်သမားများ အပါအဝင် အလုပ်သမား အားလုံးအတွက် ဝင်ငွေ ပံ့ပိုးမှုသည် အိပ်ရာ၊ လျှပ်စစ်၊ အစားအစာနှင့် အခြားသော မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည့် အရာပစ္စည်များကို ကာမိစေရန် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။
COVID-19 ကြောင့် ရပ်ဆိုင်းခံရသည့် အလုပ်သမားများ သို့မဟုတ် အခြားနည်း အလုပ်ဖြုတ်ခံရသည့် အလုပ်သမားများ (အလုပ်ပြုတ်အလုပ်သမားများ) သည် သူတို့၏ ဝင်ငွေများကို အကာအကွယ်ပေးမှု ရရှိသင့်သည်၊ အလုပ်အကိုင်လုပ်ခ စာချုပ် အရဖြစ်စေ (ဥပမာ-ဒင်းမတ်) သို့မဟုတ် အစိုးရ ထောက်ပံ့ကြေးပေးငွေများ (ဥပမာ- နယူးဇီလန်) ဖြင့်ဖြစ်စေ အလုပ်ပြုတ် အလုပ်သမားများ အားလုံးအတွက် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးခြင်းအားဖြင့် ဖြစ်သည်။
ပုံမှန်-မဟုတ်သည့် မရေမရာ အလုပ်များရှိ အလုပ်သမား အားလုံးကို သူတို့၏ ပျှမ်းမျှဝင်ငွေ နှုန်းအထက် သို့မဟုတ် ပျှမ်းမျှဝင်ငွေနှုန်းဖြင့် ၁၂ လ ကျော်ပေးသင့်သည်၊ ထိုအခါ သူတို့သည် လုပ်ခ အမှန်တကယ် ဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုခု မခံစားရပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးတွင် အမျိုးသမီးများသည် အခြားသူများအား စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း၏ အဓိကအပိုင်းတွင် ရှိကြပါသည်။ အမျိုးသမီး အလုပ်သမားများအပေါ် အပို ဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးကို သူတို့၏ ဝင်ငွေနှင့် အလုပ်များအား အကာအကွယ်ပေးရန် ထပ်ဆင့်အချက်များဖြင့် အစားထိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။
Covid-19 ဖြင့် ကူးစက်ခံလာရသော အလုပ်သမားများအား ပထမနေ့ရက်မှ စတင်၍ လုပ်ခဖြင့် နာမကျန်းခွင့်ကိုပေးရန် အာမခံချက်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ပုံမှန်-မဟုတ်သည့် မရေမရာ အလုပ်များရှိ အလုပ်သမားများကို သူတို့၏ ပျှမ်းမျှဝင်ငွေ နှုန်းအထက် သို့မဟုတ် ပျှမ်းမျှဝင်ငွေနှုန်းဖြင့် ၁၂ လ ကျော် ပေးသင့်သည်။
အစိုးရများသည် အလုပ်များနှင့် စီးပွားရေးကို အကာအကွယ်ပေးရန်အတွက် ငွေကြေးသုံးစွဲသင့်သည်၊ အသေးစား-နှင့် အလယ်အလတ်အတန်းအစား- အရွယ် စီးပွားလုပ်ငန်းများအပါအဝင်ဖြစ်သည်၊ ထိုသို့လုပ်ပေးခြင်းဖြင့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခများနှင့် လူမှုဖူလုံရေးကို ကာကွယ်ပေးရာရောက်သည်။
အားလုံးသော လုပ်ငန်း ပံ့ပိုးမှု ကိစ္စများမှာ အလုပ်သမားများ၏ လူမှုဖူလုံရေးနှင့် ဝင်ငွေကို ပထမ ဦးစားပေးရမည်။ အစိုးရများသည် လိုအပ်သည့်ကိစ္စ၌ အဓိကကျသည့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုကို ရယူသင့်သည်။
အလုပ်ပြုတ် အလုပ်သမားများအား ဘေးကပ်ကြီး အတောအတွင်း အခရာကျသည့် ဝန်ဆောင်မှုများတွင် အလုပ်ပြန်ခန့်ရန် အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ထုတ်ရန်အတွက် သမဂ္ဂများနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်ရန်။
COVID-19 ကို ထိန်းချုပ်ထားရန်အတွက် ဗဟုသုတနှင့် နည်းပညာ လျင်မြန်စွာ လွှဲပြောင်းမှုကို သေချာစေရန်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် အဖွဲ့လိုက်အလုပ်သည် အမြတ်အစွန်းယူရန် မဟုတ်ဘဲ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ တုံ့ပြန်မှုကို လမ်းညွှန်သင့်သည်။
မူပိုင်ခွင့်၊ ကုန်သွယ်ရေး စည်းမျဥ်းများ၊ နှင့် ကုန်သွယ်ရေးပိတ်ပင်မှုတို့ကို ကုသမှုလွှဲပြောင်းပေးခြင်းနှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များကို နှေးကွေးသွားစေရန်အတွက် ခွင့်ပြုရမည် မဟုတ်ပါ။
ဆင်းရဲသော နိုင်ငံများအနေဖြင့် ရောဂါထိန်းချုပ်မှုဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်များ၊ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုနှင့် ကုန်ပစ္စည်း သယ်ယူပို့ဆောင်မှုတို့ကဲ့သို့- အခရာကျသည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ အပေါ် မိမိတို့၏ ဂရုစိုက်မှုနှင့် သုံးစွဲမှုကို အာရုံစိုက်အလေးပေးနိုင်စေရန် သေချာအောင်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်- သူတို့၏ လက်ရှိ ကြွေးမြီများကို လျှော်ပစ်ရမည်။ ဘေးကပ်ကြီးကို အကြွေး ပိုမိုတင်သွားစေရန် အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
ဘက်စုံ အဖွဲ့အစည်းများသည် အားလုံးသော နိုင်ငံများအနေဖြင့် Covid-19 ဗိုင်းရတ်စ်ကို ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည့် အရင်းအမြစ်များ ရှိကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ရမည်။
Covid-19 နောက်ပိုင်းကာလ စီးပွားရေးတွင် လိုအပ်သည့် ကျွမ်းကျင်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပြီး လက်ရှိ အလုပ်မလုပ်နိုင်သော အလုပ်သမားများ (အလုပ်ပြုတ် အလုပ်သမားများ) အတွက် လေ့ကျင့်သင်တန်းများ တည်ထောင်ပေးရန်။
အလုပ်ရှင်အားလုံးတွင် မိမိတို့၏ ကုန်စည် ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များရှိ အလုပ်သမားများအတွက် စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်ရှိသည်၊ အထူးသဖြင့် ကိုယ်ပိုင်-အလုပ်လုပ်သူများ သို့မဟုတ် ကန်ထရိုက်လုပ်သူများအား မှီခို၍ အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူများအတွက်ဖြစ်သည်။ ယနေ့ ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေး ပြဿနာများဖြင့် ပျံ့နှံ့နေကြောင်း သက်သေအထောက်အထားရှိပါသည်။ Covid-19 ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ အတူတူဖြစ်သော အဆင့်ဆင့်အချက်များကို ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်တစ်လျှောက်လုံး သွတ်သွင်းထားရန် သေချာအောင် လုပ်ဆောင်မှု မရှိဘဲ ၎င်း၏ ဘေးကင်းလုံခြုံရေး တစ်ခုလုံးကို အာမမခံနိုင်ပါ။
ဤနည်းဖြင့်သာလျှင် အလုပ်ရှင်များ မိမိတို့၏ စောင့်ရှောက်ရမည့် တာဝန်ကို ကျေပွန်နိုင်မည်။
ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များ၏ အဆင့်တိုင်းရှိ အလုပ်ရှင်များသည် တည်ဆဲ အလုပ်သမား စံနှုန်းများကို လိုက်နာရမည်။
အလုပ်သမား ပါဝင်လုပ်ဆောင်မှုအပေါ် အခြေခံသည့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ စီမံရေးစနစ်ကို ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေးကွင်းဆက်၌ ကုမ္ပဏီများ အတွင်းနှင့် အချင်းချင်းအကြားတွင် ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
ကုန်စည်ပို့ချပေးသည့် အလုပ်ကွန်ရက်များရှိ အသေးစား ကန်ထရိုက်လုပ်သူများ (ကုန်စည်ပို့ချ ကားမောင်းသမားများ) သို့ လိုအပ်သည့် လေ့ကျင့်သင်တန်းနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကာအကွယ်ပေး ကိရိယာပစ္စည်းနှင့် ပိုးသတ်သန့်စင်ရည်တို့ကို ပေးသင့်သည်။
အလုပ်ရှင်များသည် ကုန်သွယ် သမဂ္ဂများနှင့်အတူ မိမိတို့၏ တိုက်ရိုက် အလုပ်သမားများ၏ နေရေးထိုင်ရေး အခြေအနေများ အန္တရာယ်အဆင့်ကို သိရှိရန် လုပ်ကိုင်သင့်သည်။ အန္တရာယ်အဆင့် မြင့်ကြောင်း (လူပြည့်ကျပ်နေခြင်း၊ ညစ်ပတ်နေသည့်အခြေအနေ) တွေ့ရှိလျှင် အလုပ်ရှင်များအနေဖြင့် WHO ကျန်းမာရေး လမ်းညွှန်များကို လိုက်နာနိုင်စေမည့် ယာယီ နေထိုင်စရာကို လုပ်ပေးသင့်သည်။
အလုပ်ရှင်များသည် မိမိတို့၏ ကုန်စည်ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်များရှိ ကုမ္ပဏီများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ပိုင်-လုပ် အလုပ်သမားများ (ကုန်စည်ပို့ချပေးသည့် ကားမောင်းသမားများကဲ့သို့) ထံသို့ မိမိတို့ ကျင့်သုံးသည့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအကြောင်း သတင်းအချက်အလက်များကို ဝေမျှပေးကမ်းသင့်သည်။
အလုပ်ကို အဝေးမှလုပ်နိုင်သည့် အလုပ်များရှိ ထိုအလုပ်သမားများကို အိမ်မှနေ၍လုပ်ရန် လိုအပ်သည့် ကိရိယာ ပစ္စည်းတို့ကို ပေးအပ်ခြင်းဖြင့် ခွင့်ပြုပေးရန် အလုပ်ရှင်များသည် သမဂ္ဂများနှင့်အတူ လုပ်ကိုင် သင့်သည်။
အလုပ်ရှင်များသည် မိမိတို့၏ ကုန်ပစ္စည်း ဖြန့်ချီရေး ကွင်းဆက်ရှိ ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ၊ ကန်ထရိုက်လုပ်သူများနှင့် အခြားသူများမှာ ဤလမ်းညွှန်များကို လိုက်နာခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်သည်။